Ahoana ny hevitry ny mpanjifa momba ny tontolon'ny haino aman-jery vaovao? | Martech Zone
Ahoana ny hevitry ny mpanjifa momba ny tontolon'ny haino aman-jery vaovao?
Zoma, Jolay 3, 2015 Douglas Karr
Misy quandry mahaliana rehefa mangataka Feedback amin'ny alàlan'ny fanadihadiana mifanohitra amin'ny fanangonana tena izy fitondran-tena. Raha manontany ny mpanjifa rehetra ianao raha te hanao doka, dia misy vitsivitsy voafantina mety hitsambikina sy hidina momba ny fomba tsy ahafahan'izy ireo miandry ny doka manaraka hipoitra amin'ny Facebook na amin'ny dokambarotra manaraka mandritra ny fandaharana amin'ny fahitalavitra tiany indrindra. Tsy mbola nihaona tamin'io olona io mihitsy aho…
Ny tena izy, mazava ho azy, dia manao doka ny orinasa satria mandeha izy. Fampiasam-bola izany. Indraindray ny fampiasam-bola dia maharitra amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary hahatratra izay tsy antenaina fiverenana mivantana amin'ny fampiasam-bola. Amin'ny fotoana hafa, fampielezan-kevitra mahery io… mety ho fihenam-bidy… izay tokony hamaly ny valiny eo noho eo. Na dia milaza aza ny mpanjifa fa tsy tia doka, ary mety hisoroka ny dokam-barotra, dia mbola mihetsika ihany izy ireo rehefa misy ifandraisany amin'ny zavatra mahaliana na takian'izy ireo ny doka.
Fampitandremana fotsiny izany rehefa mamakafaka ny valin'ny fanadihadiana. Ny valin'ity fanadihadiana ity avy amin'ny vondrona Acquity dia manana asa lehibe amin'ny fampitahana ny fihetsiky ny mpanjifa amin'ny fantsom-baovao vaovao raha oharina amin'ireo fantsona nentim-paharazana. Facebook, ohatra, manakaiky ny fahefan'ny dokam-barotra amin'ny gazety. Na izany aza, ny TV sy ny Print dia manana ny tsena ihany koa amin'ny familiana mpanjifa vaovao manana atiny misy marika.
Nolazaiko foana fa tsy mandeha any amin'ny Facebook ny mpanjifa mba hividy ny fividianany manaraka, ka tsy isalasalana fa tsy misy fankasitrahana firy ireo atiny tohanan'ny mpanohana - na dia mety hahomby aza ny fihenam-bidy. Raha lazaina amin'ny teny hafa… ny mpanjifa dia tsy miraharaha ny hidirana fifandraisana manokana amin'ny marikao - omeo fifanarahana fotsiny izy ireo raha manao izany.
Acquity Group, ampahany amin'ny Accenture Interactive, dia nanadihady mpanjifa 2,000 amerikana momba ny fanantenan'izy ireo ny firotsahan'ny marika amin'ny sehatry ny varotra. Nandinika ny fahazarany sy ny safidiny manodidina ny firosoana amin'ny nomerika, ny fiantsenana ary ny serivisy izy ireo hahitana fironana izay hisy fiatraikany amin'ny marika amin'ny 2015 sy ny sisa.
Ny fahafaha-manao, araka ny hevitro, dia manararaotra ny fangatahan'ny mpanjifanao fifandraisany sy valiny. Raha hitan'ny mpanjifa fa ny fidirana amina marika dia hahazo azy ireo izay tadiaviny ary rehefa tadiavin'izy ireo izany dia hisoratra anarana izy ireo!
Sintomy ny tatitra feno - Acquity Group, 2015 Fandinihana ny varotra ho an'ny varotra manaraka.
Tags: fihetsiky ny mpanjifafangatahan'ny mpanjifafihetsiky ny mpanjifampanjifa tsy mivadikafihenam-bidyFacebookgeolocationtsy fivadihanamillennialsfandoavam-bola amin'ny findayPrintfanamafisana ara-tsosialyfihenam-bidy ara-tsosialy
Finesse: apetraka, ampio vokatra, ahazoam-bola.
Tratry ny 4 Jolay! Afaka mandoa vola ny maha-Tia Tanindrazana azy amin'ny media sosialy
Jul 8, 2015 amin'ny 7: 07 AM
Ny fihenam-bidy raha ny hevitro dia tsy misy akony lehibe amin'ny tobin'ny mpampiasa amin'ny facebook sy twitter.
Jul 8, 2015 amin'ny 11: 23 AM
Tsy mpankafy fihenam-bidy lehibe aho, Paul. Mahatsapa aho fa mahazo diso ireo mpanjifa eny an-tsena ary manome lanja ny vokatrao na serivisinao. Saingy ny fanadihadiana hatrany dia milaza fa manaraka marika amin'ny media sosialy ny olona satria manantena fifanarahana, fihenam-bidy na tapakila.
Sep 18, 2015 ao amin'ny 4: PM PM
Hey Douglas, inona no holazainao fa ireo orinasa 5 ambony izay misy fiatraikany amin'ny lanscape media vaovao?
Sep 19, 2015 ao amin'ny 7: PM PM
Fanontaniana mahavariana izany ary misy refy marobe amin'izany. Misalasala foana aho ny hitaky ny “top” satria mifandraika amin'ny filan'ny orinasa sy ny fomba fifandraisan'izy ireo amin'ny fomba mahomby amin'ny vinan'izy ireo. Fa media vaovao:
Mieritreritra aho fa misy fiovana mahatalanjona tonga miaraka amin'ny horonantsary ka dia hisokatra miaraka aho Blab. Ny fahafaha-manana ity fihaonambe an-tsary misokatra ity miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny mpijery dia traikefa tsy manam-paharoa sy tena mahafa-po.
Snapchat mety ho ny manaraka. Noho ny endrika vonjimaika an'ny fanavaozana dia manjary mangarahara kokoa ny orinasa sy ny olona. Mahatsiaro ho voaro izy ireo.
Gazety Sysomo dia fandrosoana lehibe amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy izay ahafahan'ny orinasa mihaino ny marika asehon'izy ireo amin'ny horonan-tsary sy sary fa tsy voalaza ao anaty lahatsoratra.
Optimove dia orinasa iray izay mampiasa ny fianarana milina haminavina sy hanolotra traikefa faran'izay tsara amin'ny mpampiasa hampandroso ny mpitsidika ny fantsom-pivadihana.
Apple mila manana fanamarihana… tsy hoe satria fanboy fotsiny aho, fa ny Apple Watch dia fandrosoana amin'ny haitao azo itondra izay mampanantena.